'Waldaan Maccaa Tuulamaa Gadaa Oromoo deebisuu irratti fuulleffata' - BBC News Afaan Oromoo
A.L.I bara 1955 hundeeffamee sirnoota mootummaa Itoophiyaa darban sadii keessatti si'a hedduu cufamee, hooggantoota fi deeggartoota isaa hedduu kan irraa wareegaman Waldaan Maccaa Tuulamaa deebi'ee ijaarameera.
Mootummaa Itoophiyaatiin waggootaa saddeet dura erga cufamee booda hayyama mootummaan kenneen guyyaa Dilbataa Magaalaa Finfinnee keessatti deebi'ee ijaaramuu Pireezidantiin Waldichaa Obbo Dirribii Damisee Bultoo BBC'tti himaniiru.
Waldaan kun siyaasarraa bilisa kan ta'e waldaa hawaasaati kan jedhan Obbo Dirribiin hacuuccaa uummata Oromoorraa ga'aa ture irraa kaasuuf jecha quuqamtoonni tattaaffii dhuunfaa isaaniitiin eegalanii amma haga kana guddateera jedhu.
Hundeeffamasaarraa eegalee erga hojii keessa galees mootummaadhaan cunqurfamaa turuusaa kan dubbatan Obbo Dirribiin ''Mootoleen Itoophiyaa keessa turan uummanni Oromoo yoo jabaate aangoo nu saama jechuun gadi qabaa turan,'' jedhan.
Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa darbaan waldicha dararullee waldaan kun eegamee yoona ga'eera, kutannoo ilmaan isaatiin badii jalaa baraarameera jedhan Obbo Dirribii Damisee Bultoo.
''Waldaan Maccaa Tuulamaa mootummaa biyya kanaatiin dhufee darbuun hedduun dararameera. Namni jalaa hidhameera, ajjeefameera, biyyaa hari'ameera."
"Waajjirri jalaa cufamee qabeenyaansaas saamameera. Garuu waldaa kana onnee uummata Oromoo keessaa baasuu hin dandeenye. Waldaan kun onnee Oromoo keessatti waan biqileef hanga uummatichi jirutti yoomiyyuu baduu hin danda'u," jedhan.
Hundeessitoonni waldichaa qabeenya, lafaa fi darbaniis lubbuusaanii tokkittii waldaa kanaaf kennaniiru kan jedhan Obbo Dirribiin dhaloonni ammaas miira sanaan waldaa kana kunuunfachuu akka qabu dhaaman.
''Waldaan kun isa dhumaaf erga cufamee waggaa saddeettan darban gaafachuu hin dhiisne. Dhoksaadhaanis inuma walgeenya. Keessattuu dameen Ameerikaa hedduu nu deggere. Ammammoo ifatti bananneerra.''
Waldaan kun namoota qabsoorratti miidhaman, kanneen qabeenyaan jalaa barbadaa'e, kanneen hidhamanii fi qe'eerraa buqqa'an gargaaraa kan tureedha jedhan Obbo Dirribiin.
Waldaan Maccaa Tuulamaa ganama wayita hundeeffamu haalli hawaas diinagdee uummata Oromoo akka har'aa kana hin turre kanaafuu wantoonni jijjiiramanii fi fooyya'uu malan ni jiru jedhan.
''Bara sana kaayyoo guddaan mana barumsaa banuudha. Amma manni barumsaa bakka hundatti banameera. Kanaafuu amma gara caalu kan irratti xiyyeeffannu Gadaan Oromoo deebi'ee bakka hundatti akka cimu gochuudha jedhan.
"Gadaan deebi'ee jennaan Oromummaan deebi'e jechuudha. Oromummaan deebinaan ammoo Hawaas Diinagdeen Oromoo bakkasaatti deebi'a,'' jedhu Obbo Dirribiin.
Uummanni Oromoo waliisaa fi saboota biroo waliin nagaadhaan akka jiraatuuf hojii nageenyaarrattis waldichi akka hojjetu himaniiru.
Waldichi kan hoogganamu namoota erga A.L.I bara 1995 Koloneel Alamuu Qixxeessaa boqotanii as filatamaniini jedhan.
''Waldichi hojiisaa ilaala malee hoogganaan dhimma ijoo miti. Hooggansa cimaadhaan hoogganamuu akka qabummoo itti amanna."
"Ammaaf waruma duraatu hoogganu. Erga hundee jabeeffannee, hawaasattis baanee, miseensa baay'ifannee garuu waggaa tokkoo hanga waggaa 1 fi walakkaa gidduutti gadi teenyee filannoo seera qabeessa raawwanna.''
Buusii miseensotaa fi deeggarsa arjoomtotaan akka hojii isaanii itti fufaniis obbo Dirribiin dubbataniiru.
Bara 1985 mootummaan Itoophiyaa akka hojii keenya itti fufnuuf waadaa nuuf galee ka'ee nu haale kan jedhan Obbo Dirribiin ammas sodaa qabna jedhan.
Garuu kufaatiin waldaa kanaa mootummaadhaafi rakkoo guddaa waan ta'eef tumsuutu irraa eeggama jedhaniiru.
Jila Waldaa Maccaa Tuulamaa deebisee hundeessuuf walga'e kanarratti hundeessitoota Waldichaa kanneen akka Obbo Tadhii Liiban, Obbo Moggaa Firrisaa akkasumas namoonni yeroo dheeraaf hooggansaanis ta'ee miseensummaadhaan waldicha keessa turan argamanii ergaa dabarsaniiru.
Goodayyaa suuraa Hundeeffama Waldaa Maccaa Tuulamaa
Keessattuu hundeessitoonni kanneen akka Obbo Moggaa Firrisaa fi Tadhii Liiban waldaa Maccaa Tuulamaa ijaaruun dhaloota ijaaruu waan tureef dhaloonni har'a ijaaramee biyyasaaf falmataa jiru bu'aa waldaa kanaa ta'uu eeran.
Waldaa misoomaa fi tokkummaa Uummata Oromoo cimsuuf hundeeffame kana dhaloota ammaa keessatti hundee jabeeffatee akka kaayyoonsaa galma ga'uuf kunuunsuun akka barbaachisus dhaamaniiru.
Waldaan Maccaa Tuulamaa dhiibbaa biyya keessatti irra ga'aa ture dandamachuuf jecha damee isaa biyyoota alaattis banee hojjetaa ture.
Hoogganaa waldichaa damee Ameerikaa kan ta'anii fi waggoota 42 booda biyyatti kan galan Pirofeesar Mohaammad Hasan hundeeffama Waldaa Maccaa Tuulamaatiin walqabatee qabsoo namoonni Oromoo gameeyyiin kanneen akka Baaroo Tumsaa fi Tasammaa Nagariifaa jalqaba dhaadannoo''Lafti Qonnaan Bulaaf'' jedhuun bu'uura kaa'an amma firiinsaa ifatti mul'achaa jira jedhan.
Waldaan Maccaa Tuulamaa Oromoon ofta'ee abbaa biyyummaasaa mirkaneeffatee akka jiraatuuf bu'uura kaa'eera jedhu.
Yeroo ammaas bu'uura kaa'ame sanarraa bu'aasaa argaa jirra jedhan.
Akka hayyoonni kunneen jedhanitti miseensonni waldicha hundeessanii fi ergasiis itti makaman addunyaa mararra faca'uun dhiibbaawwan garaagaraa keessatti yaad-rimee waldichaa lafa qabsiisaniiru.
Kanaafuu garaagarummaa yaadaa fi siyaasaan osoo hin daangeffamne Sababa Oromummaaf qofa waldaa kana jabeessuun akka barbaachisus dhaaman.